July 29, 2021 » LIX Ka Mid Ah Ciyaaryahanadda Waaweyn Ee Barcelona, SHAN Atletico Madrid » Axadle Wararka Maanta
LIX Ka Mid Ah Ciyaaryahanadda Waaweyn Ee Barcelona, SHAN Atletico Madrid
Saddex kulan oo kaliya ayaa ka hadhay horyaalka waddanka Spain ee LaLiga, waxaanay kooxuhu isku dhegganaan doonaan illaa maalinta ugu dambaysa oo ay ku tartami doonaan horyaalka.
Atletico Madrid, Actual Madrid iyo Barcelona ayay laba dhibcood oo kali ahi u dhexeeyaan, waxaanay taasi ka dhigan tahay in kooxda dhibco lumisa kulamada hadhay ay tartanka ka bixi doonto.
Sidaas oo ay tahay, ciyaartooyo waaweyn ayaa saddexda kooxoodba ganaax kaga maqnaan kara kulamada u hadhay, waxaana walaaca ugu weyn uu haystaa Barcelona oo tirada ugu badan ee xiddigaheedu ay yihiin kuwa dareemaya xumadda, inkasta oo qaarkood ay is ilaalin karaan.
Lix ciyaartoy oo ka tirsan Barcelona, shan Atletico Madrid ah iyo mid Actual Madrid ah ayaa min hal kulan seegi doona haddii ay kaadhadh digniin ah qaataan.
Barcelona oo ah kooxda ugu daran ayay lixdeeda xiddig ee ugu muhiimsan min hal kaadh u jiraan in ay u buuxsamaan tirada shanta kaadh ee digniinta ah ee ay ciyaartoydu ku mutaystaan ganaaxa halka kulan ah.
Ciyaartoydan ayaa kala ah Lionel Messi, Gerard Pique, Antoine Griezmann, Frenkie de Jong, Oscar Mingueza iyo Jordi Alba.
Atletico Madrid ayaa iyagana waxa xilli ciyaareedkan kaadhadhkii ugu badnaa qaatay Stefan Savic oo 14 kaadh la siiyey, halka Koke uu helay sagaal kaadh. Labadan ciyaartoy ayaa min hal kaadh oo kale haddii ay qaataan, waxay seegi doonaan min hal ciyaar. Sidaas oo kale waxa ah Mario Hermoso, Saul Niguez iyo Thomas Lemar.
Actual Madrid ayaa iyaduna halistan oo kale uu ku jiraa kubbad-dilaha reer Brazil ee Casemiro oo sagaal kaadh oo digniin ah qaatay xilli ciyaareedkan, waxaana midkii ugu dambeeyey lavatory taagay kulankii Sevilla ay barbarraha 2-2 la galeen Axaddii.
Casemiro ayaa ganaax ku maqnaan doona hal kulan haddii uu kaadh kale oo digniin ah qaato.
Atletico oo bilaa kaadh ah xilli ciyaareedkan
Inkasta oo ciyaartoyda Atletico Madrid la siiyey 92 kaadh oo digniin ah xilli ciyaareedkan, haddana 35 kulan oo ay kooxdu ciyaartay wali hal ciyaartoyn akaadh cas lagama siinin illaa hadda.
Actual Madrid oo ah kooxda ugu kaadhadhka yar waxay ciyaartoydeedu qaateen 53 kaadh oo digniin ama huruud/jaalle ah kuwaas oo saddex ka mid ah ay kaadh casaan ah noqdeen.
Barcelona ayaa iyagana ay ciyaartoygeedu qaateen 62 kaadh oo digniin ah iyo laba kaadh oo casaan ah.
Kooxda ugu akhlaaqadda xun LaLiga xilli ciyaareedkan waa Alaves oo 13 kaadh oo casaan ah ay qaateen ciyaartoygeedu.
Meals That Can Lower Your Diabetes Threat, Says Dietitian